စည်ပင်လုပ်ငန်းများ အတွက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ပိုမိုရရှိခဲ့သည့် အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်င?? - Yangon Media Group
စည်ပင်လုပ်ငန်းများ အတွက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ပိုမိုရရှိခဲ့သည့် အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်င??
”တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေပိုမိုရရှိလာပါတယ်။ ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကဆိုရင် ရန်ပုံငွေကျပ် သန်း ၁ဝ၁ဝ၆ သန်းကျော်ပဲရတယ်။ ဒါတောင် ဟိုဘက်နှစ်က ထက်ပိုရလာတာ။ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ အဓိကအားဖြင့် သန့်ရှင်း ရေးအမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်း၊ လမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်ဂျက်ပိုချပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးမြင့်အောင်က ပြောသည်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက် မွန် ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ သို့ ခွင့်ပြုအသုံးစရိတ်ငွေမှာ ၂ဝ၁၃- ၂ဝ၁၄ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း ၄၉၅၁၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေကျပ်သန်း ၅၉၅ဝ သန်း၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေကျပ်သန်း ၆ဝ၈၈ သန်းသာရရှိခဲ့ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့၏စာရင်းအရ သိရသည်။
”စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ဝင်ငွေအနေနဲ့ မြို့နယ်စည်ပင်သာ ယာရေးဝန်ထမ်းတွေဦးစီးပြီး မြို့ ဝင်ကြေးငွေတွေကောက်ခံနေတာ ယခုနှစ်အတွက်ဆိုရင် လျာထား ချက်ထက် ပိုမိုကောက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်”ဟု ဦးမြင့်အောင်က ထပ်မံ ပြောကြားသည်။ မွန်ပြည်နယ် ၁ဝ မြို့နယ်နှင့် လမိုင်းမြို့များတွင် ကတ္တရာလမ်း ခင်းခြင်း၊ နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်းခင်း ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိပြီးစီးနေ ပြီဖြစ်သည်။
အချိန်အခါမဟုတ် မိုးကြောင့် အရည်အသွေးနိမ့် ပဲစင်းငုံများ ထွက်ရှိလာနေခြင်းနှင့် ဈေးနှုန်း မ
‘အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနှစ်ကတော့ မသေချာလို့ မမှန်းတော့ပါဘူး’ – မြင့်မြတ်